Valverde Oo Si Lama Filaan Ah Uga Jawaabay Hadii Real Ay Markii 3aad Oo Xiriri Ah Qaadi Karto UCL Xagaagan %
Real Madrid, ayaa waxay xusul duub ay ugu jirtaa fasal ciyaareedkan inay markii Saddexaad oo xiriir ah ay ku guuleystaan tartanka xiisaha leh ee Champions League, iyagoona hada jooga wareega Sideed dhamaadka ee koobkaan.
Los Blancos ayaa waxay dhagaha ay kusoo dhufteen PSG, kadib markii ay uga soo badiyeen labada lugood ee wareega 16-ka goolal gaaraya 5-2, taasoo keentay in looga baqo inay ku guuleystaan xili ciyaraeedkan koobkaan markii Saddexaad oo taxo ah.
Labadii sanad ciyaareed ee lasoo dhaafay ayay kuwada guuleystay Madrid, waana markii ugu horeysay oo ay sidaas sameyso koox tan iyo AC Milan, taasoo noqotay kooxdii ugu horeysay eel abo jeer oo xiriir ah qaada Dhaga-weyne.
Laakiin, hogaamiyaha Barcelona, ee Ernesto Valverde ayaa wuxuu hoos udhigay sheekadaas kadib markii uu tilmaamay in wax aan dhicin karin ay tahay in kooxda Mucalimuu Zidane ay xagaagan Kor-ay uluxaa Champions League.
“Real Madrid, waxay sameysay wax ay horey usameyn jirtay markii ay soo garaaceen [labada lugood] PSG,” ayuu Valverde usheegay warbaahinta kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartii ay kasoo badiyeen Espanyol, final-kii Catalan Super Cup.
“Laakiin, inay soo garaaceen kama dhigna inay ku guuleysan karaan Champions League, waxaa taasi ka horeysa shaqo adag oo rafaad badan leh, marka waan arki doonaa [Hadii ay ku guuleystaan ama in kale,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
BarcelonaChampions LeagueReal MadridValverde